Waxaan qaar ka mid ah ugu badan arrimaha Calendar iPhone la hadlayaan doonaa in this article ay la socdaan xal ay.
Ma awoodo in uu ku daro ama dhacdooyinka iyo baaba ku iPhone Calendar
Isticmaalayaasha ayaa ka warbixiyay dhibaatooyin la xiriira dhacdooyinka taariikhda ee la soo dhaafay lagu badbaadinayo; dad badan ayaa u arkay in dhacdooyinka taariikhda ee la soo dhaafay muujiya kaliya in ay jadwalka dhowr ilbidhiqsi ka dibna tageen ay. Sababta ugu badan tahay ee dhibaatadan waa in aad iPhone Calendar waxaa is beehsa la iCloud ama adeeg kale oo taariikheed online iyo sidoo kale in aad iPhone ayaa lagu wadaa inuu u hagaagsan dhacdooyinkii u danbeeyay ugu kaliya. Si aad u bedesho, u tag Settings> Mail> Xiriirada> Kalandarada; halkan waa in aad arki karin '1 bil' sida goob default noqon. Waxaad riix kartaa on Doorashadan in wax laga beddelo si ay 2 todobaad, 1 bil, 3 bilood ama 6 bilood ama waxa kale oo aad dooran kartaa All Dhacdooyinka u syncing wax kasta oo aad jadwalka.
Calendar muujinaya taariikhda iyo waqtiga aan sax ahayn
Haddii ay dhacdo in aad iPhone Calendar waxaa muujinaya taariikhda iyo waqtiga qaldan, raac tallaabooyinkan si taxadar leh oo ka mid ah ka dib markii kale inay saxaan arrinka.
Talaabada 1: Hubi in aad leedahay ugu ilaa version taariikhda macruufka aad iPhone. Habka ugu fudud ee taasi ku sameeyn si aad u cusboonaysiiso iPhone wirelessly ka badan hawada. Bareesada in aad iPhone in il awoodeed oo ah, u tag Settings> General> Software Update ka dibna riix on Download iyo rakib ka dibna marka uu suuqa kala gujisid u muuqataa, Dooro rakib si ay u bilaabaan rakibo.
Talaabada 2: Calaamadee haddii aad leedahay fursad u heli karo suuragelinayo taariikhda iyo waqtiga ay si toos ah in la cusboonaysiiyaa; u tag Settings> General> Date & Time oo shid ikhtiyaarka.
Tallaabo 3: U hubso in aad qabto zone waqtiga saxda dhigay ilaa aad iPhone; u tag Settings> General> Date & Time> Time Zone.
Macluumaad Calendar laga badiyay
Sida ugu wanaagsan ee loo xaqiijiyo in aanad lumin xogta Calendar oo dhan waa in ay archive ama aad nuqul ka mid ah Calendar ka iCloud. Si aad u samayno tagaan si ay iCloud.com iyo gasho la ID Apple aad, ka dibna la furo Calendar oo ku wadaagaan si cad. Hadda, nuqul ka URL ee tan taariikheed ee la wadaago oo la furo in mid ka mid ah daalacashada aad (fadlan ogow in halkii 'http ee URL ah, in aad isticmaasho' webcal 'ka hor inta riixaya gala / button Return). Tani soo bixi doona iyo ICS soo gudbin on inay your computer. Ku dar file Calendar this mid ka mid ah macaamiisha taariikheed ee in aad leedahay on your computer, tusaale ahaan: Muuqaalka for Windows iyo Calendar u Mac. Marka aad waxan ku samaysay, oo aad si guul leh u soo bixi nuqul ka mid ah Calendar ka iCloud. Hadda, dib u iCloud.com tago oo la joojiyo la wadaago jadwalka.
Ka hor inta xalinta arrinta jadwalka nuqul ku saabsan iPhone, gasho iCloud.com oo bal eega hadday jadwalka waa labalaabka waxaa sidoo kale. Haddii ay haa tahay, ka dibna aad qabto in aad la xiriirto Support iCloud caawimo dheeraad ah.
Haddii aan, ka dibna bilowdo by dhiig jadwalka ku iPhone. Orod Calendar app iyo guji Calendar tab ah. Tani waa in ay muujiyaan liiska jadwalka taariikhda oo dhan. Hadda, hoos u soo jiid liiskan inay dhaqaalo ka helo. Haddii cabdo ma loo xaliyo arrinta jadwalka nuqul ka dibna hubiyo haddii aad wax Lugood iyo iCloud set labadaba si hagaagsan aad jadwalka. Haddii ay haa tahay, ka dibna dami ikhtiyaarka u hagaagsan on Lugood sida labada fursadaha ku saabsan, kalandarka laga yaabaa in labalaabka, si taasoo ka iCloud u qotonsaday inay u hagaagsan aad jadwalka, waa in aad aragto jadwalka mar dambe ma aad nuqul ku saabsan iPhone.
Ma awoodo in uu arko, ku daro ama wax ka soo dejisan lifaaq ahi dhacdo taariikh
Talaabada 1: In la hubiyo in ay ku lifaaqan yihiin oo ay taageerayaan; ka dib waxaa liiska noocyada file in lagu lifaaqi karaa in taariikh.
• Pages, diridda, iyo waraaqaha Numbers. Dukumiintiyada abuuray isticmaalaya taabanaysa isu-diridda version 6.2, Pages version 5.2 iyo 3.2 Tirooyinka u baahan tahay in la cadaadiyo, ka hor inta aan halkan ku lifaaqan.
• waraaqaha Microsoft Office ('97 Office oo cusub)
• Qaabka Text Rich (RTF) documents
• Qoraalka (.txt) files
• qiimaha comma-gaar ah (CSV) files
• Tifaftirayaasha (ZIP) files4
Talaabada 2: In la hubiyo in tirada iyo baaxadda ku lifaaqan yahay 20 files iyo in aan ka badnayn 20 MB.
Talaabada 3: Isku day inaad dhiig Calendar ah
Talaabada 4: Haddii dhammaan tallaabooyinka kor ku xusan weli ma xaliyo arrintan, ka tago iyo furto app Calendar mar.
Sida loo Unlock iPhone si loo isticmaali karaa kasta Card SIM
> Resource > iPhone > Dhibaatooyinka iPhone Calendar